एजेन्सीहरूलाई उनीहरूको कफी टेबलमा यो पुस्तक चाहिन्छ Martech Zone
बिहीबार, जुन 18, 2009 बिहीबार, जुन 18, 2009 Douglas Karr
धेरै वर्ष पहिले म मेरो बॉसमा गएँ, मैले के सोचें, ग्यारेज बिक्री वर्गीकृत विज्ञापनहरूलाई प्रोत्साहित गर्न अविश्वसनीय विचार थियो। एक अनलाइन अनुप्रयोग बनाउनुहोस् जहाँ एक ग्राहकले उनीहरूको घर फेला पार्न सक्दछ र ग्यारेज बिक्री भ्रमणको एक दिन प्लट गर्न सक्दछ। बीचमा, विज्ञापनदाताहरूले खाजा वा कफीको लागि कुपन दुई वा दुई राख्न सक्थे।
मार्ग प्लट ग्यारेज बिक्री aficionado अधिक समय रमाइजि and र कम समय ड्राइविंगको साथ प्रदान गर्दछ। हुनसक्छ तिनीहरू कुञ्जी शब्द, दूरी, समय, इत्यादिद्वारा फिल्टर गर्न सक्दछन्। मेरो हाकिमले सोचे कि यो विचार योग्यता हो र म गएँ र केहि उद्धरणहरू प्राप्त गर्‍यो (त्यस समयमा १० डलर मुनि)।
यो खर्चको कारण अस्वीकृत भएको थियो।
यो एक थियो मारिएको विचार र यसले मलाई or वा years बर्ष कष्ट दिइरहेको छ यो मेरो टाउको वरिपरि घुमफिर गर्दैछ। जुन दिन यो निर्माण हुन्छ, म एउटा आँसु बगाउन जान्छु भन्ने कुरा थाहा पाएर म केहि विशेष चीजको अंश हुन सक्थें (अन्य धेरै व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूको साथ)। आज म आरामको सानो सास फेर्दै छु किनकि अन्ततः यो एक नयाँ पुस्तकमा कागजात गरिएको छ ...
मैले हार्डकभर पुस्तक प्राप्त गरें (यसका साथ बनेको) भएको ठूलो अक्षरको क्याप्सन) आज मेलमा र यो साँच्चिकै आश्चर्यजनक छ। पुस्तकको डिजाइन वरिपरि कला, प्रकाशनको गुणवत्ता, र पुस्तक भित्रका विचारहरूले यसलाई मेरो मूल्यवान पुस्तकहरूमध्ये एक बनाउँदछ जुन मैले मेरो कफी टेबलमा राख्छु। प्रत्येक एजेन्सीको एक प्रतिलिपि हुनुपर्दछ!
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी छ मारिएका विचारहरू यस हप्ता बाहिर र मतदान जारी छ! म तपाइँको कदर गर्छु ग्यारेज बिक्री म्यापरको लागि मतदान गर्नुहोस्! यो पुस्तकको लागि अन्तिम ideas० विचारहरूको लागि छान्नको लागि यो निकै सम्मानको कुरा हो - म केही आश्चर्यजनक रचनात्मक प्रतिभाको कम्पनीमा छु।
जुन 18, 2009 मा 11: 54 PM
मैले तपाईंको ग्यारेज बिक्री म्यापरका लागि मतदान गर्नुपर्‍यो ... एकदम हास्यास्पद!
जुन 20, 2009 मा 3: 04 PM
ओहो! भोटको लागि धन्यबाद!